နေသွား ဖို့ဆန္ဒမရှိဘူး။ မြန်မာဟာမြန်မာပါဘဲ။
no matter where i am, i always look forward to go back to burma, the place where i belong!
Oct 23, 2007, 2:28:00 AM
‘ဒီနေရာကို ကျနော့်အတွက် ခေတ္တနားတဲ့ နေရာလို့ပဲ မှတ်ထားပါတယ်´
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကိုကလိုစေးထူးအပါအ၀င် နိုင်ငံရပ်ခြားရောက် မြန်မာတွေဟာ ရောက်တဲ့အရပ်မှာ နားနေရလို့လား … ။
ကိုကလိုစေးထူးရဲ့ စကားနဲ့ပြောရရင် အားလုံးဟာ လမ်းလျှောက်နေကြသူတွေ မဟုတ်လား … ။
ပန်းတိုင်ကို မရောက်မချင်း လျှောက်လှမ်းနေကြတဲ့ လမ်းခရီးမှာ နေပူလည်း မိရင်မိမယ် … မိုးသည်းတဲ့အခိုက်နဲ့လည်း ကြုံရင်ကြုံရမယ် … လသာတဲ့ည .. လမိုက်တဲ့ညတွေနဲ့လည်း တွေ့နိုင်မယ် … ဆူးညောင့်ခလုတ်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နိုင်သလို … လေပြေလေညင်းတိုက်ခတ်ပြီး မွှေးပျံ့တဲ့ ပန်းခင်းလေးနဘေးမှာ လျှောက်လှမ်းရတဲ့ အခိုက်မျိုးလည်း ရှိနိုင်တာပါပဲ … ။ သေချာတာကတော့ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာ ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အားတင်းပြီး လျှောက်နေကြရတယ် … ဆိုတာပါပဲ။
တချို့လည်း အပြေးအလွှား … တချို့လည်း အေးအေးဆေးဆေး လျှောက်နေကြမှာပါ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လျှောက်နေတဲ့ ခြေလှမ်းတွေကို ရပ်တံ့မနေဘဲ … လဲကျလိုက် … ပြန်ထလိုက်နဲ့ ပန်းတိုင်ဆီကို ဦးတည်နေကြတဲ့ အားလုံးရဲ့ ခြေလှမ်းတွေဟာ ဘယ်နေရာမှာ ခေတ္တ အနားရမှာတဲ့လဲ … ။
Oct 23, 2007, 3:29:00 AM
you are very right, pls write more & more like this article, they always cover the true story, how become our education level lower down, anyway I'm always Burmese, nobody cannot change my native country
Oct 23, 2007, 4:08:00 AM
I think overseas Burmese are serving as source of hard currency as well as the skills and qualification for Burma today and tomorrow. For those who earned first degree in Burma, if they do well in overseas, it is alike living ambassadors of Burmese higher education as overseas Chinese and Indians are leading by example. Forget about those who say grapes are sour for not low enough to reach by their calibre.
We should concentrate on our own career development. We are leading more honest life with integrity without sucking anyone, without stealing any Kyat, without killing someone's father or son. I am proud to beahonest Burmese living and working in overseas. I never lose sleep over barking dogs like those who wrote crap articles in worthless paper.
Oct 23, 2007, 1:06:00 PM
လာဖတ်ပေးကြတာကိုရော၊ မှတ်ချက်ရေးပေးသွားကြတာကိုပါ အားလုံးကို ကျေးဇူးပါ။ love ခင်ဗျာ။ ကျနော့်ရေးသားချက်ရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို အခုလို ထောက်ပြတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Oct 23, 2007, 8:05:00 PM
ဦးဏှောက်ယိုစီးမှု brain drain မဟုတ်ပါဘူးလို့ ခံငြင်းနေတာက brain dry ဖြစ်တဲ့ အချိန်ထိ ဖြစ်မလားမသိဘူးလို့ စဉ်းစားမိတယ်
ထူးချွန်တဲ့၊ တော်တဲ့ ကလေးတွေ လောလောဆယ် အခြေအနေအရ မပြည့်စုံသေးတဲ့ ဘ၀မှာ တခြားသွားမယ်ဆို သွားကြ၊ မရှိလို့ မဖြစ်ဘူးဆိုတာ ဘာမှမရှိဘူးလို့ ဆိုတဲ့ စကားကတော့ ဟန်ကိုယ့်ဖို့ ပြောတာပါ တကယ့်တကယ်မှာ superior level မှာ မန်နေဂျာ အဆင့်မှာ ကိုယ့်အောက်က ကလေးတွေ ပြည်တွင်းမှာပဲ အလုပ်ပြောင်းသွားသွား ပြည်ပထိပဲ အလုပ်သွားလုပ်လုပ် ဘယ်လောက်ထိ ဖရိုဖရဲ
ဖြစ်ဖြစ်သွားရလဲ အဲဒီပြောနေတဲ့သူတွေက မသိချင်ယောင်ဆောင်နေသလားမှတ်ရတယ်ဗျာ (ကိုယ်တွေ့ကြုံရတိုင်း မြန်မာမှာ အလုပ်လုပ်ရတာ ပင်ပန်းလွန်းလှပြီဗျို)
Oct 24, 2007, 12:15:00 AM
ဒီ post အတွက် အကို့ကို ထပ်ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။ အကို့ post တွေက ခံစားချက်တွေ ပြောချင်တာတွေနဲ့ တစ်ထပ်တည်း ဖြစ်ဖြစ်နေလို့ပါ။
မြန်မာဟာ မြန်မာပါ။ တစ်နေ့မှာ ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်ကို ပြန်ပါမယ်။ ကိုယ်တတ်တဲ့ပညာနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံကို တတ်အားသမျှ ပြန်ပေးဆပ်ပါမယ်။ အဲဒီအခါ ကျွန်မတို့ကို ပညာတတ်တစ်ယောက်လို အသိအမှတ်ပြု ဆက်ဆံမှာလား။
မှားတာကို မှားတယ် .. မှန်တာကို မှန်တယ်လို့ ပြောနိုင်ဖို့ လုပ်သင့်တာကို လုပ်ကြရအောင် .. ။ မှားတာကို မှားတယ်လို့ ပြောနိုင်တဲ့တစ်နေ့ ကျွန်မတို့ တိုင်းပြည် ၀န်ကိုထမ်းဖို့ ပြန်ခဲ့မယ်။ သေနတ်ကြောက်လို့ ဘာအသိဥာဏ် ပညာမှ မရှိတဲ့ သေနတ်ပြ လူအုပ်စုတစ်ချို့ ပြောတဲ့ အမှားကို အမှန်၊ အမှန်ကို အမှား၊ သေမှာကြောက်လို့ သူ့အလိုလိုက်ရတဲ့ ပညာရှင်တစ်ယောက် မဖြစ်ပါရစေနဲ့ရှင်။
Oct 29, 2007, 1:13:00 PM
စီးပွားတွက် တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် .......
အခုဒီမှာ ရတဲ့လခရဲ့ ဆယ်ပုံတစ်ပုံသာရပစေ၊ ဗမာပြည်ကို ခုချက်ခြင်း အထုတ်အပိုးတောင် မပါဘဲပြန်မယ်။
ခက်တာက ကျွှန်တော်လုပ်တတ်တဲ့ အလုပ်ကို ဗမာအစိုးရ လက်ရှိပေးတဲ့ တစ်လစာ လခက ဒီမှာ တစ်နာရီ လုပ်ခနဲ့ အတူတူလောက် ဖြစ်နေတယ်။ ဒါတောင် ဗမာပြည်က သင်ပေးလိုက်တာလေးနဲ့တင် လုပ်စားနေတာနော်။ ဒီမှာ ကျောင်းစရိတ် တစ်ပြားမှ မကုန်လိုက်ရဘူး။
သွားလေသူ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တစ်ယောက်ကတော့ ကျွှန်တော်တို့ဘာသာရပ် ယူထားတဲ့သူတွေ ဗမာပြည်မှာ မရှိလို့ ပူစရာမလိုဘူးလို့ ပြောဘူးပါတယ်။
ဘယ်သူမြတ်လို့ ဘယ်သူရှုံးသလဲ မပြောတတ်တော့ပါဘူး။
Oct 29, 2007, 11:58:00 PM
This is just my opinion par.
Nov 6, 2007, 1:06:00 AM
သက်လည်ကို ( Agri: ) said...
မြန်မာဟာမြန်မာပါပဲ။ တကယ်ပါပဲ အမိမြန်မာပြည်ရဲ့ အေးမြငြိမ်းချမ်းမှုကို ဘယ်နေရာမှာမှမရနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်…
Nov 10, 2007, 7:46:00 AM